Dibadbaxayaal Reer Mali ah Oo la Wareegay Warbaahinta Qaranka | Gaaroodi News
Taageerasha mucaaradka ayaa iskudayay inay xoog ku galaan dhismaha golaha shacabka
Dibadbaxayaal ku sugan dalka Mali ayaa waxa ay sababeen in warbaahinta qaranka ay hawada ka baxdo xilli dibadbaxyo ballaaran ay ka dhacayeen magaalada caasimadda ah Bamako.
Booliska ayaa waxa ay rideen rasaas iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa si ay u kala kaxeeyaan dibadbaxayaasha, kuwaas oo qaar ka mid ah ay isku dayayeen inay xoog ku galaan dhismaha golaha shacabka.
Waa isu-soo-bixii saddexaad oo dhaca muddo bil ah kaas oo lagu dalbanayo in madaxweyne Ibraahim Boubakar Keita uu xilka banneeyo.
Waxaa jiray qanaacad la’aan ku aaddan colaadda dabadheeraatay ee uu dalkaas kula jiro kooxaha jihaadigga ah, dhibaato dhaqaale iyo shuruucda doorashooyinka oo lagu muransan yahay.
Isbahaysi cusub oo mucaarad ah oo uu hogaaminayo Imaamka muxaafadka ah, Maxamuud Dicko, ayaa waxa uu sheegay inuu iska dhaafay dalabkii ahaa in Madaxweyne Keita uu iscasilo.
Hasayeeshee isbahaysigu waxa ay weli ku adkaysanayaan in isbadel dheeraad ah la sameeyo kaddib markii ay diideen tanaasulaad uu soo bandhigay madaxweynaha Mali oo ay ka mid aheyd in la dhiso dowlad midnimo qaran.
Maxaa ugu dambeeyay Mali?
Kumannaan dibadbaxayaal ah ayaa waxa ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Bamako, sida uu ku warramayo tifaftiraha wararka ee BBCda Afrika la hadasha, Will Ross.
Dadkaasi qaarkood ayaa waxa ay gudaha u galeen dhismaha warbaahinta qaranka, ORTM, taas oo horseedday in hawada ay idaacaddu ka baxdo.
Waddooyinka ayaa lagu jaray waxyaabo gubanaya. Waa markii saddexaad muddo bil ah oo ay dhacaan isu-soo-baxyo ay dadku ku dalbanayaan inuu xilka banneeyo Madaxweyne Keita
Goobaha qaar ayaa la boobay, sidoo kalana waxaa jiray warar sheegaya in dhalinyaro da’yar ah ay iskudayeen inay xoog ku galaan dhismaha golaha shacabka.
Laba ilo wareed ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay u sheegeen in ugu yaraan hal qof lagu dilay afaafka hore ee baarlamaanka.
Maxay dadku u dibadbaxayaan?
Dibadbaxan ayaa ah midkii saddexaad ee la qabto tan iyo bishii Juun.
Dibadbaxyada ayaa bilowday kaddib markii isbahaysiga mucaaradka uu diiday tanaasulaad uu soo bandhigay Madaxweyne Keita oo uu ku doonayay inuu ku soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee salka ku haya sharciga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ee la sameeyay bishii Maarso.
Mucaaradka ayaa todobaadkan waxa ay sheegeen in dhaqdhaqaaqa uu iska dhaafay dalabkii ahaa inuu xilka banneeyo Madaxweyne Ibraahim Boubakar Keita. Hasayeeshee waxa ay ku baaqeen dibadbaxan sababtoo ah waxa ay doonayaan isbadello badan.
Keita ayaa xilka madaxtinimada muddo xileedkii labaad oo shan sanadood ah waxaa loo doortay 2018 hasayeeshee mucaaradad badan ayuu kala kulmay mucaaradka taas oo la xiriirta arrimo ku saabsan sare u kaca qulqulatooyinka kooxaha jihaadiga ah iyo dhibaatada dhaqaale.
Dadka reer Maali ayaa waxa ay rajaynayaan in deganaanshiyo la’aanta aanay fursad u sii noqon kooxaha jihaad doonka ah ee ka dambeeya qulqulatooyinka sii badanaya ee ka dhacaya waqooyiga iyo bartamaha dalka.